१. यी चमत्कारिक घरेलु चीज हुन्, साबुदानाको खीर र आलु।कसरी खाने ? हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस्। यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो, मोटो र मजबुत हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो चीज हो आलु।यसको लागि ३ ओटा ठुलो ठुलो आलु उमाल्ने। हरेक दिन यसरी उमालेको आलु खानुहोस्। आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ। (gnewsnepal बाट सभार)
शनिबार ओमानबाट ६ सय थान अक्सिजन सिलिण्डर ल्याउने !!
मानसिक तनाव कम गर्न अपनाउनुस् यी ६ उपाय !!